Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Ụlọikpe Mkpegharị nke Amsterdam: Scythian Gold bụ nke Ukraine
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • omenala • Education • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine
Ụlọikpe Amsterdam: Nchịkọta ọla edo Scythian bụ nke Ukraine.
Na Disemba 2016, Ụlọikpe Mpaghara Amsterdam kpebiri na a ga-eweghachi akụ ọla edo nke Scythian na Ukraine dabere na iwu Dutch na ụkpụrụ mba ụwa. Na March 2017, ụlọ ihe ngosi nka nke Crimea gbara akwụkwọ mkpesa megide mkpebi ahụ.
Ụlọikpe Dutch na-ekpebi na a ga-enyefe mkpokọta ọla edo Scythian n'aka Ukraine.
Nchịkọta ọla edo nke Scythian chịrị ka ọ bụrụ akụkụ nke ihe nketa ọdịnala nke steeti Ukraine.
Ọrụ Allard Pierson Museum iji weghachi iberibe ihe ngosi nka na ebe ngosi nka Crimea akwụsịla.
Onye isi ọka ikpe Pauline Hofmeijer-Rutten kwupụtara taa na Courtlọikpe Mkpegharị Ikpe nke Amsterdam achịla na Scythian Gold nchịkọta bụ akụkụ nke omenala nketa nke Ukraine State, na kwesịrị inyefe Allard Pierson Museum na State Museum Fund nke Ukraine.
Hofmeijer-Rutten kwuru na "Ụlọikpe Mkpegharị nke Amsterdam ekpebiela na Allard Pierson Museum ga-enyefe 'Akụkụ Crimean' n'aka ndị Ukraine State," Hofmeijer-Rutten kwuru, na-agbakwụnye na ihe ndị ahụ bụ "akụkụ nke ihe nketa omenala nke Ukrainian State" na "Nke bụ akụkụ ọha nke State Museum Fund nke Ukraine."
Ụlọ ikpe ahụ kwukwara na "ọrụ nke Allard Pierson Museum nke iweghachi ihe ngosi nka n'ụlọ ngosi ihe mgbe ochie Crimea akwụsịla."
The Scythian Gold nchịkọta nke ihe karịrị 2,000 ihe bụ na-ele na Allard Pierson Museum nke University of Amsterdam n'etiti February na August 2014. Mgbe Russia si annexation nke Crimea na March 2014, ejighị n'aka na nchịkọta bilitere ka ma Russia na Ukraine kwuru ihe ngosi. N'akụkụ a, Mahadum Amsterdam kwụsịtụrụ inyefe mkpokọta ahụ ruo mgbe edozi esemokwu ahụ n'ụzọ iwu kwadoro ma ọ bụ ndị otu ahụ bịa na nkwekọrịta.
Na Disemba 2016, Ụlọikpe Mpaghara Amsterdam kpebiri na a ga-eweghachi akụ ọla edo nke Scythian na Ukraine dabere na iwu Dutch na ụkpụrụ mba ụwa. N'ọnwa Maachị afọ 2017, CrimeaỤlọ ihe ngosi nka gbara akwụkwọ mkpesa megide mkpebi ahụ.
Na Machị 2019, Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe nke Amsterdam kagburu mkpebi ụlọikpe mpaghara mana yigharịrị mkpebi ikpe na ikpe ahụ, na-arịọ ndị otu ahụ ka ha nyekwuo akwụkwọ.